REENOEMANN: ၂၀၁၂ ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး
Posted by Ree Noe Mann at 8:29:00 PM
ရံဖန်ရံခါ အခုလို အပမ်းဖြေခရီးထွက်ပေးတာက စိတ်အညောင်းအညာပြေစေတဲ့အပြင် ဒေသန္တရဗဟုသုတပါရစေတယ်နော်။ ပြည်ပနိုင်ငံများကို သွားခွင့်ရတာက ပိုကံထူးတာပေါ့။ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ပါတွဲတင်ရင် ပိုကောင်းမှာလို့ ဖတ်ရင်းက စိတ်ထဲ တွေးမိသွားပါကြောင်း..:)
ဟုတ်ကဲ့ပါ အမ ခုလို အချိန်ပေးပြီး လာဖတ်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမ။
အဲခရီးမှာ ဓါတ်ပုံက လူတွေပုံပဲ များနေလို့ မတင်ဖြစ်လိုက်တာပါ အမ။
စိတ်တအားညစ်လာရင်..အိမ်မှာ ဖြစ်တတ်တယ်မလား.ငြီးငွေ့လာတာလေ..အဲလိုချိန်ဆို ခရီးထွက်တတ်တယ်. နီးနီးနားနား တောင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်..ဝေးဝေးလံလံဆိုလို့ ရန်ကုန်ပေါ့. အဲလိုသွားရင်း လမ်းတလျှောက်က ရှု့ခင်းတွေက မြင်ဖူးပြီးသားဆိုပေမဲ့ ငေးလို့ကောင်းတုန်း. စိတ်အလိုလိုပျော်သွားတယ်. ခရီးသွားတာရတာကို ကြိုက်တယ်..ကားမူးတာကို စိတ်ညစ်တယ်.